Umhla My Pet » Indlela Nentlungu Amaqhuma Ukuthandana umxokozelo
ukubuyekezwa: Jul. 11 2020 | 3 min ukufunda
Ezazidla luqhelekileyo ukuthandana online kukuba abantu akukhathalwa ngokuthi uyingozi zentlalo. Njani intsingiselo kakuhle amaxesha amaninzi (yaye ngokufuthi ngovuyo iqhotyoshelwe) abahlobo akholelwe bebamb xa waxelela malunga site ubudlelwane online ukuba bendikhe nje sayina kwi? "Kuthekani ukuba udibana umntu outi engaqondakaliyo?", "Ingaba sikhuselekile ngalo lonke?"Kwaye" Zonke iinkcukacha zakho zabucala iya kufumaneka ukuze wonke umntu ehlabathini ukuze ubone!"Yimibuzo abadumileyo kunye nezimvo ukuba ngokokuqhelekileyo ufumana xa esenza isaziso ukuba bahlalele ukunika iziza ukuthandana online iphele. Ngexesha kuyinyaniso ukuba kukho iingozi nentaphane ukuthandana online, bekuya kuba abuyonyaniso ukuthi ukuba bekuya kuba yingozi ngaphezu, ithi, ukuchola umntu ukusuka bar. Inyaniso, manani zakutshanje zibonisa ukuba 2013, 17% izibini ezitshatileyo ekuqaleni wadibana online.
cacileyo, ukuthandana Intanethi ifomula osebenza kakuhle iindidi ezithile zabantu. Abo baye bafumana ukuphumelela kwezi ndawo ziye ngaphambili bakwazi ukuhlangabezana amaqabane abafanelekileyo ngenxa yezizathu eziliqela. Kanye into enye, nangona, oku indlela failsafe komnye umhlaba yakho ebalulekileyo. nokuba, ukuba bazigqiba ezininzi iindlela ufumane ulonwabo, ukuthandana Intanethi ukhetho njengoko kulungileyo, njengoko nayiphi na enye. abasebenzisi ngexesha yokuqala angazikhathazi kancinane ngokuthi bobukhulu ukuthandana online. lokuqala, akukho sizathu ekusasazeni wena angakhuli. qiniseka, yinto elula kakhulu ngeposi umfanekiso okanye emibini, ukubhala imigca embalwa apho Umboniso kakuhle ubuntu bakho, cinezela Ngena yaye unqwenela ukuba eyona. Kwelinye icala, kuya kuba ngcono ukuba aqhube uphando kancinane kwaye ufumanise ngakumbi iintlobo ezahlukeneyo iziza ukuthandana online ezifumaneka. Kwakhona bekuya kuba ngumbono omhle ukuze ufumane inkcazelo engakumbi malunga iziza ezo zabaxhasi ukuba imimandla ezinomtsalane.
Xa ubhalisela kwiziza ezahlukeneyo, musa ukulibala ukufunda yoshicilelo ocoliweyo. Ewe, ezi sayithi elikhulu ezithandwayo kunye emibi impumelelo. Sekunjalo, ayisoze ukufumanisa malunga neendleko nemirhumo yobulungu ngenyanga. Ezinye iziza zaziwa ukuba zibize iifizi ukwenzela ukuba ukufikelela profiles ubulungu ngokubanzi ngoxa abanye ukuze iindleko eyongezelelweyo ups umdlalo ngempumelelo. Ngalo lonke ixesha khumbula ukuba ezi sayithi mashishini elinikeza inkonzo kuwe. Yinto ngokuqinisekileyo inkonzo entle kodwa nangoku awufuni ukuba ukubanjwa ngokuhlawula ngaphezu ngokwenene kufuneka. Kukho iziza ezikhoyo ezininzi ophucukileyo unokukucebisa ukungabizi ukuqhushumba.
Abantu abaninzi unethamsanqa ukuhlangabezana abanye babo ebalulekileyo ngokusebenzisa amaziko ukuthandana ngokwaneleyo kuphela wenza oko iinzame nomonde. Khumbula ukuba oku akuthethi indlela failsafe ye eqalile kunye nomntu. Kanye ebomini, yokuhlangana namaqabane enokubakho ngenxa yexesha, ithamsanqa nokuzingisa. Njenge, musa sityhafe ukuba uyasilela emhlabeni umhla emva kwenyanga yakho yokuqala nokusayinela le nkonzo ukuthandana. Asindlwan ngemini kwaye kungekho ulwalamano lwakho. Thatha ixesha iphumele ubuntu nabanye abantu nodibaniso nabo uzive isibheno kuni ezona. Ayikho into enokwenzeka kodwa ubuncinane kanye uyazi sowuyigqibile inyathelo lokuqala.
Ukuba nazo ithuba "ukudibana" nomntu ungathanda intanethi uze yasekeka ngempumelelo ngomhla, musa ukubeka uxinzelelo kakhulu kwesi siganeko. Njengazo zonke ezinye imihla kuqala, oku kuya kuba babonana enjani. Sekunjalo, ndicinga ukuba yonke imihla uye nazo ngaphambili. Yabona, iinjengele zakho ozithandayo nabo apho ukwazile ukuvumela iinwele zenu phantsi abone nobuncinane obulindelekileyo ngokwakho. A ulawulo jikelele seeRrand kuba ukuvumela ilungu lentsapho okanye umhlobo osenyongweni iyalazi ixesha nendawo yentlanganiso wakho kwakunye. Amathuba okuba umhla lwakho kukhokelela nantoni yingozi kodwa usoloko uhlawula ukudlala kukhuselekile.
abasebenzisi lokuqala ixesha kweziza ukuthandana online usenokufumanisa gqitha ngamava esoyikekayo. Enye indlela entle ukujonga ukuba iza kuba phi loo nto nje izixhobo ukuthandana isebenzayo kunye luncedo kweli phakade yanamhlanje. Khumbula ukuba uninzi lwamalungu site ndasayina ngenxa Injongo esifana nesakho: ufune uthando. Ngoko Abakhulule abo emagxeni, bhala phantsi ukuba iprofayile qalise kwi uhambo lwakho ukuthandana online!